Usebenza njani uTabex?
Thenga Thenga ipakethi yeepilisi zeTabex kwi-intanethi- iipilisi ezili-100 € 36,99
I-Tabex yimveliso yamayeza ngokuchasene nokutshaya. Nceda uqaphele ukuba ayisosisiyobisi salo naluphi na uhlobo kodwa ke yimveliso yendalo esekwe kwindalo. Iyafumaneka ukuthenga ngaphandle kommiselo. Umdla kwihlabathi liphela ukhule kule minyaka idlulileyo ngenxa yokusebenza kwayo.
I-Tabex inefuthe elibanzi kwiinkqubo ze-pathogenetic zokuxhomekeka kwenicotine:
I-alkaloid cytisine sisichasi esinamandla se-nicotine receptors.
I-Cytisine inoluhlu olubanzi lonyango kune-nicotine eyenza iprofayili yesenzo ikhuseleke.
I-Cytisine inciphisa uxinzelelo lweempawu ezinxulumene nokupheliswa kokunxila kwe-nicotine.
Xa kuthelekiswa nenicotine, inefuthe elibuthathaka kwinkqubo yovalo kunye noxinzelelo lwegazi
Ngaphakathi kwengqondo yakho
I-Cytisine yi-agonist ye-cholinoreceptors evela kwi-ganglia yezityalo kwaye ikwiqela leziyobisi ze-gangliostimulating. Iyonwabisa i-nicotine ebuthathaka kakhulu ye-cholinoreceptors yeembumba zepostynaptic kwi-ganglia yemifuno, iiseli ze-chromaffin kwinxalenye yemolekyuli ye-suprarenal gland kunye ne-sinocarotid reflexogenic ndawo, ekhokelela kukonwaba kweziko lokuphefumla, ikakhulu kuzo zonke iingcinga, ukulinganisa ukukhutshwa kwe-adrenaline ngu icala le-medullary le-suprarenal gland kunye nokukhula koxinzelelo lwegazi. Ukulandela ukufunxwa kwayo kumatshini wesisu, i-cytisine idlala indima yendawo yokutshaya eyehlisa ixesha lokunxibelelana phakathi kokutshaya kunye nee-receptors ezihambelana noko.
Oku kukhokelela ekunciphiseni ngokuthe ngcembe kunye nokupheliswa kweentshayi kunye nomlutha womzimba we-nicotine. Abaphandi abaninzi baqinisekisa kwizilingo ezahlukeneyo zekhemesti unxibelelwano phakathi kwamayeza e-cytisine kunye necuba, njengoko kuchaziwe ngu-Dale & Laidlaw kwaye ikwaxhaswa zizigqibo ezinamandla njenge-ganglion-evuselelayo kune-ganglioblocking Zachowsky, Anichkov, Dobrev and Paskov, Daleva, njl. Eyona nto inamandla njenge-ganglion-evuselelayo kunokuba i-ganglioblocking ibaluleke kakhulu njenge-ganglion-evuselela ngaphezu kwe-ganglioblocking broker. Iziphumo ezinokuthelekiswa zezi ziyobisi zimbini zafunyanwa kuvavanyo lokutshaya kunye ne-cytisine ininzi kakhulu kunokubaluleka. Iziphumo ezinokuthelekiswa zezi ziyobisi zimbini zafunyanwa kuvavanyo kwiigundane kunye neekati, okanye kwi-ilegine pig ileum kunye ne-diaphragm ye-rat, iidosi ze-cytisine yi-1/4 ukuya kwi-2/3 kwidosi yokutshaya. Inkqubo, iCytisine inesistim esibuthathaka, i-Cytisine inefuthe elibuthathaka xa kuthelekiswa ne-nerve system.
Uyisebenzisa kanjani iTabex Izifundo zonyango kwiTabex Malunga noMthi weLaburnum